Ngaphansi kokukhanya, yinhle futhi iyinhle. Ibuye isetshenziswe ekwakhiweni kwezakhiwo
Ama-facade, ama-partitions, usilingi, ama-awnings, ama-balconi namaphasishi, ama-roller blinds, izitebhisi kanye
Isiteshi sezindiza, ihhotela, i-villa ephezulu, imnyuziyamu, indlu ye-opera.
Inamandla aphezulu okudonsa kanye namandla okuzala, ububanzi obunembile bembotshana kanye nokumelana nokugqwala okuqinile
Ukumelana nezinga lokushisa eliphezulu, ukugqwala, umlilo kanye nomswakama
I-Shockproof, iyunifomu kanye nenetha elibushelelezi, ukubukeka okuhle, umuzwa onamandla wezinhlangothi ezintathu futhi akulula ukuwukhubaza
Ukugqwala, umphumela wokuhlobisa.
Udonga lwe-mesh yensimbi yokuhlobisa yokusungulwa lubuye lube nezinzuzo zokuzihlanza kanye namandla aphezulu
Amandla, ukumelana nokugqwala. Isetshenziswa kabanzi ekwakheni udonga lwangaphandle, udonga lokuhlukanisa, uphahla, njll
Izakhiwo, kanye nengaphakathi leziteshi zezindiza, amahhotela, amakilabhu, izindawo zokuzivocavoca, izindlu ze-opera nezinye izakhiwo
Izindlu, amahholo emibukiso, usilingi, izitebhisi, amakheshi, izakhiwo zamahhovisi zikanokusho, amahhotela, amahhotela aphambili
Umhlobiso wangaphandle we-ballroom, ihholo lebhizinisi, njll.
Izinga lokunwetshwa kwe-aluminium ophahleni lwensimbi lomhlobiso we-mesh:
Material: i-aluminium, insimbi engagqwali, i-galvanized
Ububanzi: 0.3 - 2.0m, noma ngokwezifiso
Ubude: 0.5 - 4.0m, noma ngokwezifiso
Umumo wembobo: idayimane, i-hexagon, unxantathu, ngokwezifiso
I-facade, i-partition, usilingi, i-awning, i-balcony kanye nephaseji, i-shutter rolling, i-stair passage
Isikhumulo sezindiza, ihhotela, i-villa ephezulu, imnyuziyamu, indlu ye-opera.
Ukumelana nokugqwala, ukumelana ne-asidi ne-alkali, ukumelana nomlilo
Idale ukubukeka kwesimanje kwezakhiwo okuhlaba umxhwele
Ukufakwa okulula nokuphephile, ukuhlolwa nokugcinwa
Ezomnotho uma kuqhathaniswa nezindleko ze-keel
Olandelayo: Ikhava ye-air conditioning ye-aluminium yangokwezifiso
Yethula ikhava ye-aluminum ye-air conditioning Khetha ohlwini lwethu lwamaphethini emvelo, emifanekiso kanye nawejiyomethri, noma ihhovisi lethu lokuklama lithuthukise iphethini engokwezifiso evumelana nokubukeka kwakho okufunayo. I-Alunotec ihlinzeka ngezinsizakalo eziphelele zokuphela-kuya-ekupheleni. Ikhava ye-Aluminium air conditioner iyisisetshenziswa sokuvikela sangaphandle se-air conditioner. Inezici zamandla aphezulu, ukufakwa okulula, ukubukeka okuhle, ukuchithwa okuhle kokushisa, ukuqina okuqinile nokunye. ...
Igumbi umhlobiso wangaphandle odongeni Laser cut eqoshiwe ...
Ukucaciswa kwesikrini sensimbi yokuhlobisa nge-laser eqoshiwe Into Incazelo Ishidi le-Aluminium, ishidi lensimbi engagqwali, insimbi ye-corten Ukuqina 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm,8mm,9mm,10mm,15mm Usayizi owenziwe ngezifiso Max. usayizi 1800mm*6000mm Surface Treatment Powder coating, Umbala we-PVDF Noma yimiphi imibala ye-RAL oyikhethayo Iphethini (umklamo) Noma yimaphi amaphethini esingawenza ngokwezifiso njengoba udinga Isicelo se-laser cut eqoshiwe isikrini sensimbi yokuhlobisa 1. Noma iyiphi i-deco yangaphakathi...